E Prime Khabar | सरकारबाट बाहिरिने समाजवादी पार्टीकाे निर्णय उपेन्द्र यादव र मो. इस्तियाक राइले दिए राजीनामा
सरकारबाट बाहिरिने समाजवादी पार्टीकाे निर्णय उपेन्द्र यादव र मो. इस्तियाक राइले दिए राजीनामा
काठमाण्डौ – सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको समाजवादीले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार छाडेको हो ।
पार्टीको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई आजै राजीनामा दिन पनि निर्देशन दिएकाे छ । सरकारमा संघीय समाजवादीबाट अध्यक्ष यादव र मोहम्मद इश्तियाक राई सहभागी हुनुहुन्छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहनुभएका यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न खोज्नु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भएको थियो ।
मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले यादव विदेश भ्रमणमा रहेका बेला मन्त्रालय नै हेरफेर गरिदिनुभएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहनुभएका यादवलाई त्यसबेला कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । राई भने शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ ।
केही दिनअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश २ को राष्ट्रिय सभा चुनावमा एकता गर्ने सहमति गरेपछि सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टी असन्तुष्ट बनेको थियो ।
थप ३६० जनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या २१ हजार ७ सय ५० पुग्यो